Nhoroondo yeKambani - Sun Master International Limited
SUn Master International Zvishomaikambani inogadzira fenicha yekunze. Isu hatisi chete fekitori yeOEM ine ruzivo rwemakore anopfuura makumi maviri, asi inyowani dhizaini yekugadzira inoramba ichitangisa anopfuura mamodheru makumi matatu mwaka wega wega. Isu takanangana nerattan wicker, fenicha yetambo, uye fenicha yemachira ine aruminiyamu mafuremu uye mafuremu esimbi akasungirirwa nerudzi rwakasiyana rwezvinhu senge mapurasitiki huni uye teak huni.
Yedu yepamusoro chinzvimbo ndeye 8 0,000 seti yemidziyo pamwedzi nevane mazana matatu vashandi vane ruzivo. Takawana BSCI uye iyo ISO 9 0 0 1: 2015 yekupa basa riri nani kune vatengi vedu.
Isu tanga tichigadzirisa aruminiyamu profiles uye fenicha seyese mubatanidzwa kwemakore gumi. Isu takapinza michina yekubuda kunze, anodizing michina yekugadzirisa uye ekuona maturusi kubva munyika dzakabudirira kuti upe hwakanakisa Kukwanisa kwedu ndeye 80,000 seti yemidziyo pamwedzi. Nekuedza kwevashandi veSun Master uye chinangwa che "Hunhu hwekutanga, Mutengi kutanga", Sun Master anozobatana pamwe neshamwari dzese kubva pasirese nebasa rakakwira-rakakwira-yepamusoro uye rakaperera.
Wedu mukuru Terry akatora zvinzvimbo zvepamusoro zvakasiyana muindasitiri yekugadzira zvisati zvave CEO weSun Master International Ltd anova anogadzira fenicha yekunze uye dhizaini yekutarisa kuhotera, umbozha, patio, kushandiswa kwechibvumirano. Akazvarwa muHong Kong uye akatamira kuCanada mu1988 uyo akakurira muVancouver. Terry akapedza kudzidza muUniversity yeVictoria kuBC Canada kweBachelor yeArt iyo yakamuunzira hwaro nepfungwa yekugadzira chigadzirwa chitsva. Iye akabatsira mazhinji evatengi vake dhizaini uye akagadzira anosvika 1500+ mamodheru emidziyo yekunze aine yake makore gumi nemasere basa nguva muChina.
Kunzwisisa kwedu kune dhizaini yakanaka kunoreva kusanganisa kwekunakidzwa uye kusimba, chidimbu chega chega fanicha muenzaniso wakanaka wezvairi kudikanwa zvinodiwa uye zvakanakisa-mune mhando yepamusoro zvinoenderana nevatengi vedu. Isu takashanda pamwe nemakambani epamusoro mazana mashanu anoteedzana makore uye misika iri kunyanya yekuEurope neUnited States.
Gore rega rega dhizaini itsva uye mamodheru anogadzirwa kuti agutse zvinodiwa nevatengi vedu. Mhando dzekusarudzika dzakagadzirirwa vatengi vane hukama hwakareba nesu, izvo zvinovabvumidza kukwikwidza zvakanyanya mumusika wekunze wefenicha munyika dzavo. Kuvandudza hukama hwakareba nevatengi vedu uye vatengi ndicho chinangwa chedu. Isu zano redu rakareruka nderekuchengetedza kuvimbika uye kusarongeka mumitengo kuti uwane kuvimba.
Fekitori yedu iri muFoshan City, Guangdong, China. Zvinotora maminetsi makumi mana kuenda kufekitori kubva kuGuangzhou Baiyun airport. Unogamuchirwa neushamwari kutipa kushanya uye kuona yakanaka Guangzhou City. Isu tiri vanopfuura vanofara kukutora iwe kufekitori yedu uye showroom. Ngatigadzirei nzvimbo iri nani yekunze, yako, neyenyika.